के भइरहेछ २ नम्बर प्रदेशमा ?
नाम मधेश प्रदेश राख्न र मधेशी भाषालाई प्रदेशको भाषाको मान्यता दिन पारीबाट बुद्धिजीवीको ठूलै लर्को लागेको रहेछ २ नम्बर प्रदेशमा । पारीका नम्बर प्लेटका गाडी, पारीका मान्छेको आवतजावत बाक्लै छ । त्यसमाथि वीरगञ्जस्थित पारीकै महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीहरुको राजनीति पनि कडै देखिदैछ ।
बुद्धिजीवीको नाममा पारीका सिपाहीहरुको बिगबिगी बढ्दा पनि नेकपाको सरकार चुपचाप छ । देशमा विदेशीको चहलपहललाई न्यूनिकरण गर्नुको साटो मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न भनेर प्रधानमन्त्री समय बिताइरहेका छन् । के हो यो ?
राजधानीदेखि जुम्लासम्म, सडकदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनसन जारी छ । अनसनकारीहरुको माग समानता, न्याय र सुशासन छ । सुशासन र समृद्धि मुख्य लक्ष्य हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली कूशासनमा अल्झीरहेका छन् । उनी आफै भन्छन्, मलाई समय कम छ । समय कम भएका नेता राजनेता बन्नका लागि कठोर निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा माफियास“ग गाला जोडेर बस्नुले उनी पनि सिमित घेराको नेता बनेर बित्ने मार्गमा देखिन्छन् । यस्तालाई दयामात्र गर्न सकिन्छ ।
हुन त राजधानीमा बसेर देशको शासन गर्नेहरु कहा“ स्वतन्त्र छन् र ? २ नम्बर प्रदेशमा खुलेआम पराई बुद्धिजीवी देखिएका छन्, राजधानीमा घुइरो घुइरो विदेशीको आदेश र निर्देशन भइरहेको हुन्छ । विदेशीको आदेशलाई लाघ्ने साहस न केन्द्र शासनमा छ, न प्रदेश शासनमा । प्रदेश त त्यसै पनि अर्को देश बन्नुपर्छ भन्ने घातक हतियारहरुको उर्वर भूमि हो । त्यस्ता हतियारलाई केन्द्रले छुनसम्म सकेन । यसको मूलकारण पारीका बुद्धिजीवी रिसाउलान् भनेर नै हो, कसलाई थाहा छैन र ?
अन्तमा, कम्युनिष्टका सम्पत्ति विदेशमा टन्नै
५ वर्षे शासक बनेको छ नेकपा । नेकपाको सम्पत्ति टन्नै देखियो । नेकपाका नेताहरुको सम्पत्ति पनि टन्नै देखाए । तर विदेशी वैंकहरुमा थुपारेको सम्पत्तिमा आधाभन्दा बढी नेपाली कम्यनिष्टकै छ भन्ने खबरले आश्चर्य थपेको छ । स्वदेशमा सम्पत्तिवाल कम्युनिष्ट, विदेशमा सम्पत्ति थुपार्ने कम्युनिष्ट । यी देशभक्त रे ।